Maxaa ku qoran qodobka 39 ee dastuurka Ethiopia ee uu maamulka Soomaalidu adeegsan rabay shalay? – Xeernews24
Maxaa ku qoran qodobka 39 ee dastuurka Ethiopia ee uu maamulka Soomaalidu adeegsan rabay shalay?
5. August 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Markii uu dalka Itoobiya ka baxay gacantii kacaankii Derg-ga ee uu hormuudka ka aha Mingistu Hailamariam oo ay taladu gacanta u gashay EPRDF waxaa is bedelay nidaamkii siyaasadi ee dalkaas.
Itoobiya waxa ay qaadatay nidaam Federaal oo ku dhisan qaab qoomiyadeed iyo dastuur siiyey qoomiyadahaas awoodo aysan hore u heli jirin.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee Dastuurka Itoobiya-da Federal-ka ku dhisan ku qoran waxaa ka mid ah in ay Maamul Gobolleedyada ku disan Qowmiyadaha ina go’i karaan oo ay aayahooda ka talin karaan “Self Determination”. Sidaa darteed ayaa gobolka Soomaalida shalay waxaa ka dhacay rabshado, ayada oo laga qabsi qabay inay go’aan.
Si ay u go’aan waxay adeegsan karaan qodobka 39-aad ee dastuurka dalkaas.
Muxuu dhigayaa qodobka 39-aad ee dastuurka Itoobiyada?
1. Xuquuqda Qowmiyadaha, dhalashooyinka iyo dadka aayo ka tashi, oo ay ku jirto xaqa ay u leeyihiin go’itaan.
2.Qowmiyad walba, dhalasho walbba iyo dadka Itoobiya waxa ay xaq u leeyihiin in ay ka hadlaan, qoraan oo ay horumariyaan afkooda; muujiyaan, horumariyaan iyo sare u qaadaan dhaqankooda; oo ay ilaaliyaan sooyaalkooda.
3.Qowmiyad kasta, dhalasho iyo dadka Itoobiya waxa ay awood buuxda u leeyihiin ay helaan ismaamul oo ay qeyb ka yihiin dhisidda hay’ado dowli ah ka dhisaan deeganadooda waxa ayna xaq u leeyihiin ay saami cadaalad ah ka helaan matalaada dowladda deegaanka iyo Federaal-ka ah.
1.Xuquuqda aayo ka tashiga oo ay ka mid tahay go’itaan, ee ay qowmiyad walba xaqa u leedahay waxa ay ku suurtagali kartaa:
1.Marka saddex meelood laba ka mid ah ay golaha baarlamaanka dowlad deegaanka qoymiyadda iyo dadka ay quseyso ansixiyaan.
2.Marka ay dowladda Federalka ay qaban qaabiso afti ay qasab tahay in ay ku qabato muddo saddex sanno ah oo ka bilaabaneysa marka ay golaha baarlamaanka dowlad deegaanka kala wareegto rabitaanka go’itaanka ah.
1.Marka aftida go’itaanka ah uu ku meelmaro coddeyn aqlabiyad ah
2.Marka dowladda Federaal-ka ah ay ku wareejiso awooddeeda golaha baarlamaanka ee qowmiyadda, dhalashada iyo dadka u codeeyey in ay go’aan; iyo
3. Marka hantida loo kala qeybsado sida uu dhigayo sharciga.
1.”Qowmiyad, dhalasho ama umadd” waxa uu dastuurkan ku qeexayaa, umad wadaagta dhaqan isku mid ah iyo caado isu dhaw, is fahan afeed, is aqoonsi dhalasho, fahan ku dhisan aanimaad oo sida ay u dhisan yihiin ah, iyo degenaanta deegaan la garanayo oo ay aad ugu badan yihiin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/sual.jpg 225 225 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-05 07:56:452018-08-05 07:56:45Maxaa ku qoran qodobka 39 ee dastuurka Ethiopia ee uu maamulka Soomaalidu adeegsan rabay shalay?
Dowladda Ethiopia oo soo saartay war cusub + Militariga oo ku hareereysan Cabdi... Saaka Magaalada Jigjiga iyo xaalkeega: